Talking about exams (စာမေးပွဲအကြောင်းပြောဆိုပုံများ) - Myanmar Network
Talking about exams (စာမေးပွဲအကြောင်းပြောဆိုပုံများ)
Posted by zar ni (My Way!) on August 14, 2013 at 17:37 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျောင်းတွေမှာ စာမေးပွဲတွေသာမရှိလျှင်ဘယ်လိုနေမည်လဲ။ ကျောင်းသားတွေကတော့ပျော်ကြမည် ထင်သည်။ သို့ရာတွင် စာမေးပွဲစစ်မေးခြင်းက ကျောင်းသားများ၏တတ်မြောက်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့ အဆင်အပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ယနေ့တိုင်ရပ်တည်လျက်ရှိမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာမေးပွဲတွေအကြောင်းပြောဆိုပုံများကိုတော့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများ၊ ကျောင်းသူ ကျာင်းသားများ မဖြစ်မနေလေ့လာရပေဦးမည်။
စာမေးပွဲများ၏ အမျိုးအစားနှင့် အခေါ်အဝေါ်များအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အတန်းတွင်းစာမေးပွဲ in-class test ဖြေရတာ၊ take home final အိမ်ယူဖြေရသည့်စာမေးပွဲကြီးမျိုးလည်းရှိသည်။ မေးခွန်းပုံစံကအဖြေမှန် ရွေးရသည့် multiple choice ပုံစံ၊ essay စာစီစာကုံးပုံစံလည်းရှိနိုင်သည်။ စာမေးပွဲနှင့်ဆိုင်သည့် ဝေါဟာရ များကတော့ Examination စာမေးပွဲ၊ Mid-term နှစ်လယ်စာမေးပွဲ၊ Finals အတန်းတင်
Test စာမေးပွဲ၊ စစ်ဆေးခြင်း။ Quiz (US) အလွတ်ရေးဖြေစာမေးပွဲ၊ ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်း၊ Pop-quiz ရှောင်တခင်စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ။
A take-home final is an examination at the end of an academic term that is usually too long or complex to be completed inasingle session as an in-class final. There is usuallyadeadline for completion, such as within one or two weeks of the end of the semester. A take-home final differs fromafinal paper. (Wikipedia)
Research paper သုသုတေသနစာတမ်း
Final paper သုဘဘွဲ့ယူစာတမ်း
Open-book test/final စာအုပ်ကြည့်ဖြေရသည့်စာမေးပွဲ
"How many tests did you have to take in your Math class?"
သင်္ချာဘာသာမှာ စာမေးပွဲဘယ်နှစ်ခု ဖြေရလဲ။
"What was the mid-term like?"
"How much percentage is the mid-term towards the final grade?"
နှစ်ဝက်ရမှတ်က အတန်းတင်စာမေးပွဲအမှတ်အတွက် ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပါလဲ။
"Do you have to write any papers in that class?"
"How many pages did you have to write for your essays?"
"Was the open-book exam hard?"
"How difficult was the take-home final?"
"Was the final exam short answer questions, or was it multiple choice?"
နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကြီးက မေးခွန်းဖြေရတာမျိုးလား အဖြေမှန်ရွေးရတာမျိုးလား။
"It was multiple choice." အဖြေမှန်ရွေးရတာ။
"Neither. The exam had2long essay questions." တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး။ စာစီစာကုံးအရှည်နှစ်ပုဒ်ရေးရတာ။
"Did you have any pop-quizzes in your geology class?"
ဘူမိဗေဒမှာ ကြိုတင်အသိမပေးပဲစစ်တဲ့ စာမေးပွဲ တွေပါလား။
"We had3pop-quizzes in that class. Luckily, only five percent counts toward the final grade."
သုံးခုဖြေရတယ်။ ကံကောင်းလို့ နောက်ဆုံးအမှတ်သတ်မှတ်ချက်အတွက် အဲဒါက ငါးရာခိုင်နှုန်းပဲ အကျုံးဝင်တယ်။
"Fortunately we didn't have any." ကံကောင်းလို့ တစ်ခုမှမဖြေရဘူး။
"How much time did you get to write your research paper?"
"We had two months to write the research paper."
သုတေသနစာတမ်းရေးဖို့ အချိန် နှစ်လ ရတယ်။
"How often did you haveaquiz?"
စာမေးပွဲ ဘယ်လောက်များ ဖြေရလဲ။
"Onceaweek." တစ်ပတ်တစ်ခါ
"What day did you take your final?"
"When did you take your final?"
"I took the final last Monday." ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ဖြေခဲ့တာ။
"I didn't take it yet. I take the final tomorrow." မဖြေရသေးဘူး။ မနက်ဖန် စာမေးပွဲကြီးဖြေရမှာ။
"Are you done with your mid-terms?"
"When is finals week?"
"The syllabus for the econ class says you have six exams. What were they like?"
(economic) စီးပွားရေးဘာသာသင်ရိုးကတော့ စာမေးပွဲခြောက်ကြိမ်ရှိတယ်ပြောတယ်။ ဘယ်လိုနေလဲ။
"It was pretty easy because they only covered2chapters. If you keep up, then you shouldn't haveahard time."
တော်တော်လွယ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နှစ်ခန်းပဲ မေးတာ။ ပုံမှန်လိုက်ရင် အခက်အခဲတွေ့စရာ မရှိပါဘူး။
"How difficult is the mid-term for psychology 101?"
စိတ်ပညာ ၁၀၁ ရဲ့ နှစ်ဝက်စာမေးပွဲက ဘယ်လောက်ခက်လဲ။
စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်လို့ မေးခွန်းများများမေးခြင်းက မိမိအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေပါတယ်။ အောက်ပါမေးခွန်းများဟာ အသေးစိတ်အချက်အလက်ရရှိဖို့ မေးရမည့်မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါ တယ်။
"Does Professor Paul use old exam questions for his tests?"
ပါမေက္ခပေါလ်က သူ့စာမေးပွဲတွေအတွက် မေးခွန်းဟောင်းတွေ သုံးသလား။
"He always creates new test questions so old ones will not help you."
သူကအမြဲတမ်းမေးခွန်းအသစ်တွေပဲမေးတာ။ မေးခွန်းဟောင်းက အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။
"Can I borrow your old exams for Accounting? I want to use the questions to test myself before the real exam."
မင်းဆီက စာရင်းကိုင်မေးခွန်းဟောင်းတွေ ငှားလို့ရမလား။ တကယ့်စာမေးပွဲမတိုင်ခင် ငါ့ကိုယ်ငါ စစ်ကြည့်ချင်လို့။
"Do you know anybody who took Physics 340? I want to know the types of questions that were asked on the final."
ရူပဗေဒ ၃၄၀ ယူတဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့များသိလား။ စာမေးပွဲကြီးမှာမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းပုံစံတွေ သိချင်လို့ပါ။
"Do you think I need to study chapter6for the mid-term? It's so boring, and I can't seem to apply it anywhere."
နှစ်ဝက်စာမေးပွဲအတွက် အခန်း ၆ ကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်ထင်လား။ ပျင်းစရာကြီး။ လက်တွေ့ဘယ်မှာ သွားသုံးရမလဲ မသိဘူး။
"What topics did the professor cover the most in the final exam?"
စာမေးပွဲကြီးမှာ ဘယ်အခန်းတွေကို အများဆုံး ဆရာက မေးခဲ့သလဲ။
"I was thinking about buying the study supplement for the engineering class. Do you think it will help?"
အင်ဂျင်နီယာဘာသာအတွက် သင်ထောက်ကူစာစောင်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ။ ကောင်းပါ့မလား။
မေးခွန်းတွေ မိမိကမေးသလို အဖြေပြန်ဖြေရတာလဲရှိတတ်ပါသည်။
"We hadatotal of4tests in that math class." Or more simply, '4 tests.'
သင်္ချာဘာသာမှာ စုစုပေါင်း စာမေးပွဲ လေးကြိမ်ဖြေရတယ်။ (သို့မဟုတ်လွယ်လွယ်ဖြေလျှင်) လေးခု။
ကဲဒါတွေကတော့စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြောဆိုပုံများကို လေ့လာနိုင်စရာ ကောက်နှုတ်ချက်တစ်ချို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါတွေလေ့လာထားလျှင် နိုင်ငံခြားတွင်ကျောင်းတက်ရသည့်အခါ မိမိသိလိုသမျှကို မေးနိုင်ပြောနိုင်ပြီပေါ့။ အောင်မြင်ကြပါစေ။
Permalink Reply by swezinlatt009 on August 19, 2013 at 12:43
Sir, Thank alots